Warmly Welcome: ရှိနေသင့်သလား ... ?
ရှိနေသင့်သလား ... ?
ပြန်မလာဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်နေရာလေးကို ရောက်ပြန်တော့လည်း တစိမ်းတရံလို အေးစက်စက် နိုင်လွန်းတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ တစ်ချိန်က ကိုယ့်အတွက် နွေးထွေးမှုတွေ ယုံကြည်မှုတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ အဖော်မွန် ဖြစ်ခဲ့လို့ အတိုင်းအဆမဲ့ သံယောဇဉ် တွယ်မိတယ်။
အချိန်တော်တော်ကြာ ဘာတစ်ခုမှ Creative မလုပ်နိုင်ရင် ဒီနေရာလေး ရှိနေတာထက် မရှိတာက ပိုကောင်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မိတယ်။ ပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့ ဒီနေရာလေးကို အလည်ရောက်လာတဲ့သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Posted by Welcome at 10:53 AM
ဘာလို့ ထွက်ပြေးနေတာလဲ မောင်လေးရေ
စိတ်ကူးလေးတွေပေါ်တဲ့ခါ ချရေး.. မင်း အိမ်ကလေး က စာဖတ်သူတွေ အတွက် နွေးထွေးမှုတွေ ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်..
ရှိနေသင့်ပါတယ် ..း) စာတွေဖတ်ဖို့ စောင့်မျှော်နေကြဆဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ် ..း))
ဟာ ဦးချစ်ဖေကြီး ရှိနေသင့်တယ်လေဗျာ. မငုံတောင် ဒီလိုပဲ မအားတဲ့ခါ ဖုန်တက်အောင် ထားခဲ့မိတယ်။ အားတဲ့ခါ အခါအခွင့်ကြုံချိန်မှာ မျှဝေတယ်။ ဒီလိုပဲပေါ့. ရှိနေသင့်တယ်။။
မငုံရဲ့ ပထမဆုံး စာဖတ်သူ ဦးချစ်ဖေကြီး ရှိနေသင့်တယ်နော့
ရှိနေသင့်ပါတယ်။ တစ်လ တစ်ကြိမ်လောက်ပေါ့
ပို့စ်လေးတင်ထားတာ အခုမှတွေ့ပါတယ် အကိုရေ..
မကြာမကြာလာကြည့်ပေမယ့် အကို့ ကိုမတွေ့ ပဲ
အဟောင်းလေးတွေကုို အကိုပြောသလို ငံပြာရည်
ကျိုပြီးပြန်ရပေါင်းလည်းများပါပြီ :D ... အခုလို
အကို ရှိနေသင့်ပါတယ်... အကို့စာတွေဖတ်ချင်
ရှမ်းလေးရေ .... အချိန်ရရင် ပြန်လာဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကြယ်ပြာ ဘလော့ စရေးခါစမှာ အမြဲအားပေးတတ်တဲ့သူရဲ့ ဘလော့ အစဉ်ရှိနေတာပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။ ကြယ်ပြာကိုယ်တိုင်တောင် တစ်နှစ်ကို တစ်ပို့စ်လောက်ပဲတက်ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင် တခုတ်တရ ရေးသားစုဆောင်းထားတဲ့ ဒီနေရာကို ဘာအကြောင်းကိစ္စနဲ့မှ မပျောက်ပျက်သွားစေချင်ပါဘူး ... မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် အမြဲသစ်နေမှာပါ ... အစစ အဆင်ပြေပါစေ ...
oh.a great ideas .i like it verymuch and love it. thank u for this site. god bless u,guys.
ဖြစ်နိုင်၇င် ချင်းပြည်နယ်နဲ.သူ.၇ဲ.လှပတဲ. အကြောင်းအ၇ာလေးတွေ ကို ပါ ဓါတ်ပုံနှင်.တကွ တင်ပြပေးပါလို. တောင်းဆိုပါတယ် ။အကို.၇ဲ.ဆိုဒ်က အ၇မ်းပဲ လူကို စွဲ ဆောင်မှူ၇ှိပါတယ် ဆက်လက်ပီးတော.ကြိုးစားသွားပါ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်နော်းးး